10-14-2011 02:08 AM #981
America DV ukd pvHk;rSm b,fae&m ( odkh ) b,fqdkifrSm wifvdkh &ygvJ/ wpfcgrS rwifbl;vkdh b,fvdkvkyf&rvJ rodvdkhyg/
a[mh'D 0bfqkdufxJudkoGm;? Entry Instruction udk aocsmzwf? b,fvdk "gwfyHkrsdK;vdktyfw,fqdkwJh tnTef;udk Photo Validator rSmaocsmzwfNyD; tGefvdkif;uwifr,fqdk&ifawmh Begin Entry xJrSmom oGm;wifvdkufAsm ... qkdifrSm oGm;wif&if ydkufqHukefw,f/ qdkifrSmrS vkyfcsifw,fqdk&ifawmh pD;wD;a[mrSm wpfcsuf oGm;pHkprf;Munfhyg/
2323, Chit.tat.lun.tu, Faith, kokoye, ManawHary, mrlynn, NayWarWar, RunAtServer, talkyboy, yokesoe
10-14-2011 05:31 AM #982
pvHk;u b,folawG Scuba Diving oifwef; wufcsifvJAsdKU...
wpfa,muf2em&Dpm x&defeifudk 45 usyf. (yHkrSef 190 wJh)
12 Nov 2011 to 12 Jan 2012 twGif; BudKufwJh&uf &w,fwJh...
certificate ray;bl;vm;As ??? ay;&ifawmh pdwf0ifpm;w,f
2323, Chit.tat.lun.tu, Grace, kokoye, mgknow, MNO.BN, mrlynn, NayWarWar, RunAtServer
10-14-2011 02:35 PM #983
ဟိုတစ်ခါ ကိုယိုးဒထင်တယ် တင်ပေးထားတဲ့ စင်ကာပူမှာ အိမ်ခန်းငှါးလို့ရနိုင်တဲ့ ပရိုက်ဗက် ကန်ပနီ တွေရဲ့ ဝတ်ဆိုက်လိပ်စာတွေ သရက်ထဲပြန်ရှာတာ မတွေ့ဘူးဖြစ်နေလို့ သိတဲ့လူများ ပြန်တင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ ကျနော်လက်ရှိအိမ်က နောက်နှစ် မတ်လ ၂ နှစ်စာချုပ်ပြည့်မှာဆိုတော့ ဖေဖော်ဝါရီလလောက် နောက်ဆုံးထားရှာရတော့မယ်ဗျို့။ ပွဲစားခသက်သာအောင် ကန်ပနီတိုက်ရိုက် ရှာချင်လို့ပါခင်ဗျာ။
2323, barronbala, changralong, Grace, KaungKinPyar, kokoye, mgknow, MNO.BN, NayWarWar, RunAtServer
10-14-2011 02:50 PM #984
udkvif;..tdrfu tJavmufawmif MudK&Sm&vdkYvm;/ aumif;uifwdkYtdrfu 'DZifbmudkNynfhjyD/ Zefe0g&DaezdkYudk tdrfuvluawmh aemufvukefrS&Smr,fwJh/ apmao;vm;vdkY aeaewm/
*drf;aqmhaewJh vlMuD;udk enf;enf;avmuf wGef;vdkufOD;rSyJ
2323, barronbala, changralong, Chit.tat.lun.tu, Grace, kokoye, mgknow, MNO.BN, mrlynn, NayWarWar, Oscar Htun, RunAtServer
10-15-2011 01:23 AM #985
Compaq desktop ပြင်ချင်လို့ ဘယ်မှာ ကောင်း မလဲ လမ်းညွန်ကြပါဗျာ, Presario SR1745CF ပါ ခင်ဗျာ.....အချို့က HP service center ၊ အချို့က Challenger လို့ အကြံပေးပါတယ်၊ ဝယ်တုံးက တော့ HP က တိုက်ရိုက်ဝယ်တာပါ
2323, barronbala, changralong, Chit.tat.lun.tu, kokoye, NayWarWar, RunAtServer
10-15-2011 02:03 AM #986
Wannabe Cupid woking ~_~
tcGefaqmifzdkYtwGuf Peninsula rSmb,f Agent aumif;vJrodbl; .. tMuHay;MuygOD;cifAsm
Visit my newbie blog http://www.mmshock.com for latest anime, movie downloads with MF
changralong, Chit.tat.lun.tu, kokoye, MNO.BN, NayWarWar, RunAtServer
10-15-2011 02:14 AM #987
တခုပဲ အခွန်ငွေ ကို ကိုယ်တိုင် လိုက် ဆောင်ပေါ့. ပြီး စာအုပ် ရွေး မှ ပိုက်ပိုက်ပေး ပေါ့ ....ဘယ် Agent မဆို စိတ်ချ ရ မှာပါ။ ပိုက်ပိုက် ကြို မပေး ထား သ ရွေ့
2323, barronbala, changralong, Chit.tat.lun.tu, kokoye, MNO.BN, mrlynn, NayWarWar, RunAtServer
10-15-2011 04:23 AM #988
စလုံး က မူလတန်း ကလေးမိဘ တွေ ကို အကူအညီ တောင်း ချင် လို့ ပါ
အထူးသဖြစ် ရန်ကုန် ကျောင်းက နေ စ လုံး ကို ပြောင်း လာ တဲ့ အ တွေ့ အ ကြုံ ရှိ တဲ့ မိဘတွေဆီ က ပါ
ကျွန်တော့ ကလေး အ ကြီး ကောင် က ဂရိတ် ၂ ပါ ။ လောလော ဆယ် ထိုင်း မှာ အင်းဂလိပ် ကျောင်း မှာ တပ် နေ ပါ တယ်
သူ့ ကို စ လုံး မှာ ပြောင်း ထား ခြင် လို့ ပါ
ကျောင်း က စ လုံး က ကိုယ် နေ တဲ့ ရပ်ကွက် နား က ကျောင်း မှာ ပဲ ထား လို့ ရ ပါ သလား ခင် ဗျား
တန်းစီ ရတယ်ဆို တာ ဘာ ကို ပြော တာ လဲခင်ဗျာ
ချက်ခြင်း တက် လို့ မရင် အ ချိန် နာ သွား မှာ မ ဟုတ် လား
ဒီ မှာ က ဖေဖော်ဝါရီ မှာ ဂရိတ်တူး ပီး ပါ မယ်
စ လုံး က မေးခွန်း တွေ ယူ ဖြေ ခိုင်း တော့ ဖြေ နိုင် ပါ တယ်
ဒါ ပေ မဲ့ တ ရုပ် စာ တော့ မ သင် ဖူး ပါ
အဲတာ ဟို ကျ ရင် ဘယ် လို လုတ် မ လဲ နော်
ဆောင် ရန် ရှောင် ရန် များ ကို အ ကြံ ဉာဏ် ပေး ကြ ပါ ဦး ခင် ဗျာ
တလ ကျောင်းစရိတ် လေး ( ကျောင်း ကို သွင်း ရ တာ ကြီးသက်သက်) များလဲ သိပရ စေ ခင် ဗျာ
အစိုးရ ကျောင်း မှာပဲ ထား နိုင် ပါ တယ် ခင် ဗျာ
ကျေးဇူး တင် ပါ တယ် ခင်ဗျာ
2323, barronbala, changralong, Chit.tat.lun.tu, daylight, dotekhaowe, kokoye, kosatsu, MNO.BN, mrlynn, NayWarWar, Oscar Htun, RunAtServer, solidsnake, talkyboy, Thura Soe, vodafone
10-17-2011 07:45 AM #989
uwfzHk;oHk;csifvdkY b,fvdkif;uaumif;vJ tMuHOmPfay;MuygOD;...
StarHub u vGJvdkY usefwJhESpfckudk ajymay;yg.../
2323, Ares, changralong, Chit.tat.lun.tu, daylight, mrlynn, NayWarWar, Oscar Htun, RunAtServer
10-17-2011 08:03 AM #990
ကျနော်မိန်းမက မတ်လမှာ ရွာပြန်မွေးမှာဗျ။ ဇန်နဝါရီလဆို သူကပြန်ပြီ။ ဖေဖော်ဝါရီလဆို ကျနော်ပြန်ပေါ့။ အဲလိုအလုပ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးကျပြန်တော့ အိမ်ရှာဖို့မလွယ်ဘူးဗျို့။ အဲဒါကြောင့် လက်ရှိနေတဲ့အိမ်က
၂+ ၁ + ၁ ကိုငှါးတုန်းက ၁၈၅၀ နဲ့။ မတ်လ ၂ နှစ်သက်တမ်းပြည့်ရင် ထပ်တိုးမလို့မေးတာမှာ ၂၈၀ဝ တဲ့။ ၁၀ဝ၀ လောက်အထိဈေးပိုတောင်းတာ လွန်လွန်းတယ်။ ဘယ်လိုမှမတန်တဲ့ ဈေးဗျာ။
အဲဒါကြောင့် JTC တို့လို ကန်ပနီတွေကဘဲငှါးတော့မယ်လို့ စဉ်းစားထားတာ။ အခု JTC ကလည်းအခန်းမပေါ်တော့တာ ကြာပြီ။ UGL Services ကအခန်းတွေကြပြန်တော့ ၂ နှစ်သက်တမ်းတွေဘဲတွေ့တယ်။ တချို့ဆို ၁ နှစ်လောက်ဘဲရှိတယ်။ စာချုပ်pပြည့်တိုင်း ဆက်နေဖို့ရာ မတန်တဆဈေးတောင်းတဲ့ အိမ်ရှင်တွေကို စိတ်ကုန်လာပြီဗျာ။ အဲဒါကြောင့် ပရိုက်ဗစ် ကန်ပနီတွေကိုရှာကြည့်နေတာ။ ဖန်နေချာကတော့ ကိုယ့်ဖာသာဝယ်ထည့်တော့မယ် စိတ်ကူးတယ်။
ကာဒ်ဖုန်းမှာ အမ်ဝမ်း ကအကောင်းဆုံးဘဲ မဆင်ပြော့ရေ။ ကျနော်ဆို အမ်ဝမ်းကာဒ်ဖုန်းဘဲသုံးလာတာ ၃ နှစ်လောက်ရှိတယ်။
2323, Ares, barronbala, changralong, Chit.tat.lun.tu, daylight, ngatetpyar, Oscar Htun, RunAtServer, softsin, solidsnake